Guta reGoogle iro Rakaita Kuti Toronto Hurukuro - TELES RELAY
HOME » kambani Guta reGoogle rakatsamwisa Toronto
Guta reGoogle rakatsamwisa Toronto
Google's affiliate, Sidewalk Labs, yakanga ine zvirongwa zvikuru zveIndaneti-based smart city.
Yakafanirwa kupa pfungwa yekuti isu tose tichararama sei mune ramangwana - guta rakanaka rakagadzirwa kubva paInternet - kupa vagari mukana mukana wekuwana zvigadzirwa zvemazuva ano.
Izvi zvinosanganisira motokari dzakachengetedza, nzira itsva.
Sidewalk Labs, kambani yehanzvadzi yeGoogle, yakawana imwe yakasiyiwa muToronto, Canada, nokuda kwechiitiko ichi chinotyisa, icho chaaitarisira chikazova muenzaniso wemamwe maguta munyika yose.
Ichokwadi kuti iyo inogona kuunganidza yakawanda deta kubva kune masero akaiswa pedo nekukurira kwekuchengetedza yakavhiringidza zvishomanana.
Iye zvino, vazhinji vari kushamisika kana kambani yega yega inofanira kutora kudhura kwemaguta.
Iyo purogiramu yakaziviswa nehukuru fanfare mu2017 uye kubatana pakati peSidewalk Labs neToronto Waterfront, sangano rezvekuvandudza dunhu, rakavimbisa zvinhu zvikuru.  Yakarongwa naDan Doctoroff, aimbova Mutevedzeri weMeor of New York, achishanda pamwe neboka rehurumende uye nyanzvi dzedumiti, Sidewalk Labs yakavimbisa kusangana kukuru kwemahofisi, mabhizimisi uye makombiyuta ane green agenda, mabhoti uye kushandiswa kwepasi pemarara. Ingava nzvimbo yakanaka yekurarama, "akadaro Doctoroff.
Mutungamiri Doctoroff akanga agadzirirwa kutaura mumusangano weTED munaEpril kuVancouver, mhiri kweCanada.
akacherechedza. Munguva iyi, muToronto, boka revanhu rinonzi Block Sidewalk yakabata musangano wayo wokutanga
uye hakuna mumwe wevaya vaivapo aiita seanonyanya kufara, maererano nesangano rinonzi Bianca Wylie.
Akaudza BBC kuti vanhu vakaungana vakanga vane zvinetso zvakawanda, kubva pakushaiwa kwekunzwisisa munzira iyo Toronto Waterfront yakapa chibvumirano kuSidewalk Labs kusava nechokwadi kuti iyo firiji yakazviratidza pachayo pakuzadzisa chirongwa chakadai chakadai.
Panewo kunetseka pamusoro pezvo iyo kambani inoronga kuita neyavo munguva refu.
"Boka iri rakaumbwa nokuti zvinyorwa zvakakonzerwa muToronto Star zvakaratidza kuti Sidewalk Labs yakanga ine chiratidzo chikuru pane" Isu tine hanya nekusava pachena, "Wylie akaudza BBC.
Nyaya yacho yakarondedzera, maererano nenyaya yacho, inotaura kuti hutano hweGoogle hwakanga huchida kuvaka nzvimbo yakakura zvikuru kuQuayside uye kupa hutsva hutsva kune iyo.
Mukudzorera kwekutsvaga kwake, aida chikamu chemitero yemitengo, kubhadhara mitero uye kuwedzerwa kwemuzinda wenyika iyo yaiwanzopiwa kuguta.
Izvi hazvina kupesana neSidewalk Labs.
12 acres site pa Quayside iri pasi pekukutevera mushure meSidetalk Labs contract
Maererano naAnthony Townsend, anoronga mumaguta uye munyori wezvinyorwa zvemabhuku pamaguta akachenjera, vanhu vazhinji "vane hanya" kuti huwandu hwemagariro evanhu vari kuparadzanisa makambani ari oga kubva kumagariro ehurumende.
Inyika inobata kubva ku digitairi yemadhadhi ikozvino inowedzera kune dhesi rezvemari? Will Sidewalks Lab inoita mari yekufambisa uye kufamba nehurumende? Ndiyo yake chaiyo yebhizimisi muenzaniso? Akabvunza.
Boka reCanada rinoshandisa hurumende neGoogle kumigwagwa ekumavirira
Guta reToronto Google rakagadzirwa "kubva paInternet"
Kuna Ms. Wylie, panewo mibvunzo yakawanda yekupindura pamusoro peiyo 12-dzimwe nzvimbo mapurojekiti.
"Hatina kutaura pamusoro pekusimudzira zvakanyanya kuunganidza deta, kana kutombokumbira kana munhu aida. Hapana ari pano akakumbira nzvimbo yakatakura masero, "akadaro. .
"Nzvimbo yedu yemvura inoda kuvakirwa kuitira vanhu veToronto, kwete avo vanogovera veGoogle vanobatana."
Yekare Docklands uye Industrial Zone yeToronto iri paLake Ontario.
Sidewalk Labs vakataurira BBC kuti yakanga isati yatumira zvinyorwa zvayo kuMvurafront Toronto uye yakanga ichitarisira "kuramba ichishanda pamwe neTorontonians kuti iwane kodzero iyi," achiwedzera kuti "yakanyatsozvipira kuchengetedza uye chinyararire "" ye data yedhorobha.
Huru hwemaguta akachenjera
Basa iri rinotarisana nekupikiswa kwepamutemo kubva kuCanada Civil Liberties Association (CCLA), iyo iri kutsvaga hutatu hurumende yemapurogiramu ayo eSweden Neighborhood.  Muteja wake, Brenda McPhail, akaudza BBC kuti "haina kukodzera" kune kambani yakafanana neGoogle kugadzira mitemo yekusvitsa kutonga misha.
"Kunyatsonzwisisa deta rekutsvaga paIndaneti kunokuvadza vanhu nemapoka," akadaro.
"Inobatanidza zvinhu zvose kubva kune vanhu vanotaridzirwa nezvishandiso kune zvavanotarirwa kuita kuti vhoti yavo iite. Saka tinoshamisika kuti nei tichifunga kuti kuchenjera kutumira iyi huru yemufananidzo mumigwagwa yemaguta edu
"Mhando yepamusoro yeguta inonyanya kutaura nezvehutano. Vanotenda kuti kana tine dambudziko rakakwana, isu tinogona kugadzirisa matambudziko edu ose uye tinofanira kuva vasina chokwadi pamashoko aya. "
Sidewalk Labs zvakajeka hazvibvumirane.
"Iyi nharo inofanira kunge yakadzika midzi, kwete yechokwadi uye kutya. Zvinosuruvarisa kuti zvakare zvakare CCLA yakasarudza kusanzwisisa zvisizvo basa redu nekuzvipira kwedu kune vanhu veToronto, "inodaro BBC mumutsara.
Asi CCLA haisi inzwi rakasurukirwa.
Gore rapera, kambani ine hupenyu huri woga. Mukurukota Ann Cavoukian akasarudza.
"Ndaifunga kuumba guta rakanaka rekuvanda, kusiyana neguta rakanaka rekucherechedza," akadaro pachena mubhuku rake rekurega basa.
Getty Images  Mufananidzo mumashoko ekutanga
Midzi dzakapoteredza nyika dziri kutanga kuunganidza yakawanda yematare kuti inzwisise zviri nani hupenyu hwemaguta.
Zvirongwa zvekupedzisira zvekugadzirisa hurumende zvakasara mushure mokunge vatarisana nharo. Stefani Diamond Waterfront Chair Stefano Diamond ichangobva kuudza bhuku reCanada rinonzi Logic kuti anotarisira kuti vave "mwedzi mishomanana".
Midzi dzakapoteredza nyika yose inobvuma teknolojia uye inobatanidza nekambanikoroti makambani ekuvandudza mararamiro avo emaguta,
Prof. Saskia Sassen, nyanzvi yepamusoro yeguta inodzidzisa zvemagariro ku Columbia University, anofunga kuti zvinogoneka.
"Pfungwa, kuva nekambani yega yega kuita mabasa ehurumende yakanaka uye inowanzoshanda. Asi kana iwe ukaisa dambudziko rakaoma, pane mukanano wakanaka kuti ivo vatora matanho anotevera, nokudaro vachiwedzera kuisa basa pabasa, "akadaro BBC.
"Google ichitova inyanzvi yepaInternet domain, saka kuva nekambani yakabatana nayo sekuti tenzi we-domain domain isingagoni kuva dambudziko. "
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.bbc.co.uk/news/technology-47815344
Kuenda kumwedzi kunoitei kumuviri?
Mark Levin akaudza "Hannity" kuti vatapi venhau vakanga vashanda zvakaoma "kurasa mutungamiri"